Iipostcards nemifanekiso kwiLwesine elungileyo 2018: ukubingelela, okuhlekisayo nokuhlekisayo kunye nezifiso kunye nemibhalo
Ngomhla weveki yeeholide, ucoce uLwesine, ungaqala ukupheka amaqebelengwane. Kwakhona kulungele ukungcola. Kwaye kuyimfuneko kulo mini ukuvuyisana namaKristu oOthodoki aqhelekileyo, enqwenela ulonwabo, impilo, ukuchuma. Ndikulungele ukubonisa intlonipho kunye nokukhathalela abahlobo kuya kunceda imifanekiso namakhadi amahle. Kubafundi, senze ukhetho lwemifanekiso eneenkcukacha, unqwenela, sivuyisana. Zingathunyelwa ku-Odnoklassniki kunye nezinye izinto. amanethiwekhi. Kwakhona bafanelekile ukuthumela kwi-imeyile, iimms. Iimpapasho zeeNgcaciso kunye ezimnandi kunye nemifanekiso kwiNgcaciso kaLwesine i-2018 ingathunyelwa kwizithunywa zexeshana. Ziyanconywa ukuba zongezelelwe ngeemfuno zentlanganiso enhle yePasika.
Imifanekiso yokuvuyisana neLwesine elungileyo ka-2018 - ukhetho lwezithombe kunye nemidwebo
Ngomhla weholide yeCawa yoCoceko ococekileyo ngo-2018 ungathumela imibuliso kunye neefoto kubangani. Sithathe imifanekiso engavamile kunye nehlekisayo kunye namantombazana, abantwana kunye nezilwanyana.
Ukukhethwa kwemifanekiso yokubulisa ngokuhlonipha uLwesine ococekileyo we-2018
Kokukhethwa kwethu okulandelayo, abafundi banokukhangela kalula imifanekiso yokubulisa engavumelekanga yoLwesine onoPhezulu. Sincoma ukongeza imidwebo kunye neefoto kwiinqwenela zakho okanye izibhengezo ezilungiselelwe kwivesi, iprose.
Imifanekiso emnandi nehlekisayo kunye neLwesine elungileyo ka-2018 - ukuhlanganiswa kwabafundi beClassmates
Ukukholisa bonke abahlobo ku-Odnoklassniki kwaye ubanika imvakalelo emihle inokuba nemifanekiso engenangqiqo malunga neLwesine elungileyo. Imifanekiso ephosakeleyo kunye neposikhadi ngokuqinisekileyo iya kubangela ukuba ummamente amnandi. Ukuhambisa iposikhadi ezihlekisayo kunye ezihlekisayo kwiLwesine oCwebileyo ngo-2018 unokuba nesifiso somntu siqu.
Ukukhethwa kwamakhadikhadi ahlekisayo kunye ahlekisayo kubafundi beClassmates ngeLwesine elungileyo ka-2018
Ngomnxeba wemifanekiso ehlekisayo nehlekisayo esiyifumene ngeLwesine elungileyo ka-2018, unokuvuyisana nabahlobo bakho kunye nabo osebenza nabo kakuhle. Bafanelekile ukuthumela ku-Odnoklassniki kwimilayezo yangasese. Yaye iyakwazi ukulayishwa kwi-albhamu yabo ngesifiso esifanayo kwizihlobo kunye nabahlobo benxantlalo, impumelelo, entle.
Imifanekiso yoqobo kunye nemibhalo ebhalwe ngeLwesine elungileyo ngo-2018 - i-postcards yama-Orthodox
Iiphostadidi zeOthodoki zilungele ukuvuyisana nabathandekayo ngeLwesine elungileyo. Imifanekiso yoqobo iyakuqinisekisa ukuba uyamkholisa abamkeli. Ukukhetha i-postcard e-Orthodox entle kunye neenkcazo kwiLwesine elungileyo ngo-2018, unako kwiqoqo elilandelayo.
Imifanekiso yokuqala yama-Orthodox yeeholide yeLwesine elungileyo ka-2018 kunye nemibhalo
Imifanekiso yamaOthodoki esiyikhethile kwiholide yoLwesine onoMoya unokuthunyelwa kuzo zonke izalamane. Iipascards ezimnandi ezinemiyalezo, imifanekiso yezithunywa zezulu, uYesu uya kubanika ukuba bafumane iimvakalelo ezintle.
Imifanekiso emihle ngoLwesine olungama-2018 kunye nePasika ezayo-ukhetho lweposi
Ukususela kwiSonto lePlanga, abaphathikazi baqala ukubhaka amaqebelengwane e-Easter, ngaloo mini ungathumela imifanekiso kubangani ngokupheka, krashenkami. Ziyakwaneliswa ngamanye amanqaku e-Easter. Unokufumana imifanekiso yasekuqaleni ngeLwesine elungileyo kunye nePasika ezayo ngo-2018 kwiqoqo elilandelayo.
Ukukhethwa kwemifanekiso enhle yeholide yeLwesine elungileyo kunye nePasika ezayo ngo-2018
Imifanekiso emihle kunye nemnandi yeholide yeSonto lePalm kunye nePasika ingathunyelwa kwi-intanethi, ii-mms, abathunywa. Fumana amakhadi angabulungelelisayo abafundi bethu abanokuyenza phakathi kwemizekelo elandelayo:
Ukuthintana namakhadi kunye nezifiso kwiNgcaciso ngoLwesine 2018 - ukukhethwa kweefoto kunye namavidiyo
Kwiiholide zecawa kungcono ukhethe amakhadi amnandi kunye achukumisayo. Azingathunyelwa kuphela kubahlobo, kodwa nakwabasebenzi kunye nabaqhelana nabo. Fumana iikhodi zeposi eziphambili ngeenqwenela ngeLwesine elungileyo lika-2018 ekuqokeleleni imifanekiso eyenziwe ngathi.
Ukukhethwa kwamakhadi anomdla kunye nezifiso ngokuhlonipha uLwesine olungqinileyo ka-2018
Amakhadi athandekayo kunye achukumisayo anomnqweno onyanisekileyo uya kunika ummkeli kakuhle. Baya kumnceda ngemimoya ephezulu ukuchitha yonke iLwesine elungileyo.
Ukuthintela iikhodi zekhadi zekholide zeeholide yoCoceko ococekileyo ngo-2018 ngeenqwenela
Akukhona nje imifanekiso, kodwa kunye namakhadi evidiyo angathunyelwa ngomhla woLwesine ococekileyo. Imifanekiso elandelayo ifanelekile ukuvuyiswa kwiholide yeholide:
Amakhadi angcono kakhulu okubulisa kunye neLwesine elungileyo ka-2018 - imifanekiso kunye nezifiso
Okumnandi ukunyanzela kwindinyana kukhulu ukuthumela ngomhla weholide yeholide. Kodwa azingathunyelwa nje kuphela njengombhalo. Ukubingelelwa kwangaphambili ngeLwesine elungileyo ka-2018, iposikhadi ezibonakalayo kunye neebongozi ziya kuhambelana.
Ukukhethwa kwamakhadi alungileyo ngokuvuyisana kunye nezifiso zoLwesine olulungileyo we-2018
Ukufumana iipastadi eziphambili kwiholide yoLwesine ococekileyo we-2018 abafundi bethu bangakwazi ukuqokelela. Iquka imifanekiso emihle neyethandekayo ngokunqwenela ngenene kwivesi.
Kuyinto enhle ukuvuyisana ngoLwesine ococekileyo kunye nePasika yezalamane zonke izihlobo zakwa-Orthodox, abahlobo bethu abafundi banokukwazi ukuqokelela iifoto ezahlukeneyo. Umzekelo, imifanekiso ehlekisayo kwaye ehlekisayo ifanele ukuthumela kubahlobo bakho abasondeleyo. Kodwa izibingelelo ezintle kunye ezinokuthintela kufuneka zithunyelwe kubazali nakwezinye izalamane. Iipascards ezona zilungileyo kunye nemifanekiso yoLwesine u-2018 ococekileyo uya kunceda ukubenza babe nemihlali enkulu. Ukuba bekunqwenela, banokuxhaswa ngemibhalo, iindinyana. Kwaye ungathumela ngokukhawuleza ikhadi-video kwintsapho yakho e-Odnoklassniki okanye nge-imeyile. Ukubingelelwa okubhaliweyo ngokuqinisekileyo kuya kubhena bonke abamukeliyo.
Ivesi zentsasa ngoMatshi 8 ngamantombazana, amantombazana nabasetyhini
Usuku lomzali ngo-2016 - khumbula abo bathandekayo abasweleyo
Indlela yokulungisa ngokufanelekileyo iKrisimesi-2017 kunye noMnyaka omdala omtsha. Yintoni ongayithethayo, yintoni amagama, imibongo, ingoma kunye neengubo zokukhetha abantwana ukuba baqoke
Ukupheka okumnandi kwiitya ezintsha
Isaladi kunye neminquma
Isipho kumama ngo-Matshi 8: ibhokisi ngezandla zam
Inkukhu kwiwayini ebomvu kunye nobhontshisi obuluhlaza